Nalalka tamarta ee farxadda leh, Nalalka LED, Qalabka Dheerka ah ee Tamarta
Tamarta kaydinta iyo tayada
Home > Tamarta kaydinta iyo tayada
Xayiraadda qashinkaaga iyo derbiyadaada waxay gurigaaga ka dhigaysaa tamar badan oo waxtar leh waxayna kaa caawineysaa yareynta isticmaalka tamarta iyo biilashaada.
keydinta Energy iyo oolnimada waa waxyaabaha ugu horeeya ee la eego markaad rabto inaad yareyso isticmaalka tamarta. Waxaa laga yaabaa in aad lumiso xoogaa tamar illaa derbiyadaada iyo saqafka haddii gurigaaga uusan ahayn tamarta tamarta leh. Ka feker sida Loft, Wall of Walls iyo qalabka dibedda ee gudaha iyo Nalalka LED-ga. Marka lagu rakibo theses mid kasta waxay badbaadin kartaa £ 100s biilka tamarta sanad walba. Haddii aad u baahan tahay talo, ka dibna wac callahayaga saaxiibtinimada ah, kuwaas oo awoodi doona inay kula hadlaan fursadahaaga iyo inaad ogaato sida ugu haboon ee gurigaaga loogu talagalay tallaabooyinkan.
Read ku saabsan siyaabaha loo xakamayn karo isticmaalka tamarta ee gurigaaga on blog.
Miyuu yahay lacag aad qarashgareyso si aad gurigaaga kuleylka uga soo saartid shaashadda?
Qolka bilaashka ah ee rinjiga qiiqa
Miyuu yahay lacag aad qarash gareeyso si aad gurigaaga kuleyl ugu soo jiido saqafka?
Inta badan guryaha la dhisay ka dib 1935 waxaa lagu dhisi doonaa derbiga godka muraayadda. Insulating macaanka ayaa badbaadin kara tamarta.
Qiyaasta 35-45% ee kuleylka gurigaaga ayaa lagu lumiyaa derbi adag waxayna ku habboon tahay in si haboon loo yareeyo biilasha tamarta.
Nalalka LED waxay bixiyaan iftiin tamarta yar, yareynaya biilasha iftiinka illaa 80%.